Man United oo ku dhow inay lasoo saxiixato laba xiddig ka tirsan kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid – Gool FM
Man United oo ku dhow inay lasoo saxiixato laba xiddig ka tirsan kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid
Dajiye July 16, 2021
(Manchester) 16 Luulyo 2021. Maamulka kooxda Manchester United ayaa si xawli ah uga shaqeynaya sidii ay u taageeri lahaayeen tababare Ole Gunnar Solskjær, si ay ugu diyaar garoobaan caqabadaha xilli ciyaareedka cusub, ha ahaadeen heerka Horyaalka Premier League, iyo tartamada gudaha, ama Champions League.
Sida uu daabacay wargeyska “The Sun” ee dalka England Manchester United ayaa ku dhow inay dhameystirto labo heshiis si ay u xoojiso difaaceeda, kan hore wuxuu noqon doonaa Raphael Varane oo Real Madrid ah, kan labaadna wuxuu noqon doonaa daafaca buuxa ee reer England Kieran Trippier oo ka tirsan Atlético Madrid.
Wararka ayaa waxay xaqiijinayaan in la dhameystiray labadan heshiis, waxaana la filayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo dhamaadka Isbuuca soo socda, sida uu wargeyska xaqiijiyay.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in maamulka Man United ay doonayaan inay bixiyaan 50 million pounds si ay u helaan Raphael Varane, kaasoo hal xilli ciyaareed uga harsan yahay qandaraaskiisa haatan ee kooxda Real Madrid, halka Trippier uu doonayo inuu u dhaqaaqo United, heshiiskaas oo galay heerarkiisii ​​ugu dambeeyay ayaa wuxuu ku kici doonaa 18 million pounds.
Manchester United oo uu hoggaaminayo tababare Ole Gunnar Solskjær, ayaa ku guuleysatay inay kaalinta labaad kaga dhameysato horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore, sidoo kale waxay gaareen finalka tartanka UEFA Europa League oo ugu dambeyntii ay ku guuleysatay kooxda reer Spain ee Villarreal.
Markus Babbel oo ka hadlay fursada ay Liverpool u heysato inay ku guuleysato Premier League xilli ciyaareedka soo socda
“Uma qalmo qiimaha Paris Saint-Germain ay bixisay!” – Xiddig hore reer Brazil ah oo weeraray Neymar Jr